Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara eserese kpo oku | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Portillo nke German | | Nchekwa ike, Omenala ulo
O doro anya na ị chetụla echiche banyere otu esi enyere aka melite mkpuchi ọkụ nke ụlọ gị na-enweghị ọrụ ọ bụla. Ọ dị mkpa idobe mgbidi ahụ nke ọma iji bulie ọnọdụ okpomọkụ na ume anyị na-eji na ntụ oyi nke ụlọ. Maka ụdị ọnọdụ a, e mepụtakwara ya agba thermal. Ọ bụ nnukwu ihe ọgbara ọhụrụ na-enyere anyị aka ime ka mkpuchi dị n’elu elu wee nwekwuo ekele na njirimara ya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe niile Njirimara na otú kwes agba ọrụ, dị nnọọ na-agụ 🙂
1 Rdị agba agba ahụ ọkụ
2 Njirimara pụrụ iche
3 Ebee ka enwere ike itinye ya?
4 Kedu ka agba agba nke igwe si arụ ọrụ?
5 Ego ole ka ọ na-eri?
Rdị agba agba ahụ ọkụ
Ọ bụ ihe mgbanwe na ụwa nke mkpuchi na ike nchekwa. Na-enweghị ịgbanwe ụdị ihe eji eme mgbidi ahụ, anyị nwere ike ime ka mkpuchi ahụ dịkwuo elu. Homelọ nwere ezigbo ihe nwere ike inyere anyị aka ichebe onwe anyị pụọ na mgbanwe nke okpomọkụ n’etiti ụlọ na n’èzí. N’ụzọ dị otu a anyị anaghị ata ahụhụ n’oge oyi ma ọ bụ okpomoku dị elu n’oge ọkọchị. A na-eji ya na-ejigide ọnọdụ siri ike n'ime ụlọ.
Na mgbakwunye, a ghaghị itinye ya na nke ahụ ezigbo mkpuchi mgbidi na windo ga-azọpụta ume. Mgbe oyi na-atụ ma ọ bụ dị oke oke ọkụ anyị na-eji ngwa eletriki dị ka kpo oku na ikuku oyi. Ha abụọ na-eme ka ọkụ eletrik dị ukwuu n'ụlọ. Ọ bụghị naanị na anyị ga-eji ihe ọkụkụ na-echekwa ụgwọ ọkụ eletrik, kamakwa anyị ga-ebelata mmetọ.
N'ime ihe mejupụtara, anyị na-ahụ microspheres seramiiki nke na-arụ ọrụ site na ịmepụta ime ikuku. Airlọ ikuku a na-ahụ maka imebi àkwà mmiri dị ugbu a ma na-enyere anyị aka ịnọrọ onwe anyị pụọ n'èzí. Ọ bụ ezie na agba agba a na-achakarị ọcha, enwere ike ịde ya na agba ọzọ nke agba nkịtị n’elu nke anaghị ada mbà.
Ọ dị mma ka ị tinye akwụkwọ Uwe 2-3 nke agba agba ọkụ maka ezigbo mkpuchi rue mgbe ebighebi. Ọ bụrụ na anyị agba agba ọzọ ma ọ bụ jiri agba ọzọ chọọ mma, anyị agaghị efunahụ ihe ndị ahụ. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ezigbo ngwaahịa na mgbanwe na ahịa.
Njirimara pụrụ iche
Maka ezinụlọ ndị ahụ niile ụlọ ha anaghị ekpuchi nke ọma, ihe a bụ aka onye nsọ. Njirimara ya dị egwu ma na-ekwe nkwa na ọ bara uru. Site na nkesa nke agba ọkụ na mgbidi nke ụlọ ahụ, anyị nwere ike nweta ego nke ihe ruru 40% na igwe ikuku na kpo oku.
N'aka nke ọzọ, ọ nwere ihe ndị na-egbochi ọdịdị nke mmiri. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ọ na-achọta mmiri mmiri na mgbidi ochie n'ihi ụzọ ọkpọkọ si aga. Otú ọ dị, agba a na-egbochi odide mmiri na mgbidi, ya mere mmiri apụtaghị.
O nwekwara mgbochi ebu ihe, ya mere anyi agaghi enwe nsogbu na ero na nje. Ihe omume a metụtara nke gara aga. Dị ka usoro ha na nje dị mkpa ka iru mmiri gburugburu ebe obibi. Ya mere, site na ịhapụ ịhapụ mmiri mmiri na mgbidi, anyị agaghị enwe nsogbu nke ụdị a.
N'ikpeazụ, agba a nwere àgwà pụrụ iche nke bụrụ onye na-ere ọkụ. O nweghi ihe o mere ma oburu na anyi etinye ya oku n’enweghi nsogbu ma obu na enwere ihe ojoo nke ulo. Agba igwe na-ekpo ọkụ agaghị ere ọkụ n'ọnọdụ ọ bụla.
Ebee ka enwere ike itinye ya?
Ọ bụ ihe e kere eke gburugburu ebe obibi na-enyere anyị aka ime ka mkpuchi nke ụlọ anyị dị elu n’emeghị ka ebe obibi dị. Na mgbakwunye, mgbe anyị tinyere ya n'ọrụ anyị na-enwetakwa Mbelata na mkpọtụ n'èzí.
Igwe mmiri a na-ekpo ọkụ bụ ihe na-eme ọtụtụ ihe. Kwesighi ịbụ ọkachamara na ụwa a ka ị nwee ike itinye ya na mpaghara ọ bụla. Ọrụ ọ na-arụ dị ezigbo mkpa na ụlọ iji belata mmefu na kpo oku na ikuku oyi. Enwere ike itinye ya n'ime ụlọ na n'èzí iji nwekwuo nsonaazụ gị.
Nke a na agba a na-na nnukwu ina niile ụdị ulo oru na nchekwa ngwa. Nke a bụ n'ihi oke iguzogide okpomọkụ, iru mmiri, ọkụ na enweghị ike ịkwụsị ya. N'ebe ndị a na-emepụta ihe, ọ bụ ihe a na-ahụkarị mgbidi na ọnọdụ dara ogbenye n'ihi ọrụ ndị na-ewere ọnọdụ. Otú ọ dị, na agba a, a pụrụ ịnọgide na-enwe ezigbo ihe ịchọ mma na ọnọdụ bara uru nke mgbidi ahụ. Ejikwala ya n’elu ụlọ na n’elu ụlọ maka ihe ndị pụrụ iche o nwere.
Kedu ka agba agba nke igwe si arụ ọrụ?
Ọ bụ ajụjụ anyị na-ajụ onwe anyị oge niile. Kedu otu uwe agba ga-esi enyere aka ịpụ ọkụ ma ọ bụ oyi n'ime ụlọ? Ọ bụrụgodị na mgbidi nke ụlọ ahụ adịghị arụ ọrụ nke ọma. Agba a, mgbe etinyechara ya na ihicha ya, nwere microspheres nke a haziri nke ọma n'ọtụtụ ọkwa. Akwa ndị a na-etolite ụlọ ikuku nke na-agbaji akwa mmiri ahụ.
Ọ bụrụ na anyị ịgbakwunye refractory Njirimara nke seramiiki ihe, anyị nwere ike ikwu na a sara mbara ụdịdị dị iche iche nke mere anyanwụ radieshon na-ese n'elu "bounces". N'ụzọ dị otú a, a na-ebelata nnyefe nke okpomọkụ n'etiti mpụga nke ụlọ na ime. Ọ nwere ike ịjụ ọbụna 90% nke ikuku radiation infrared na ihe ruru 85% radieshon ultraviolet.
N'ime ụlọ ọrụ dị iche iche na-ere ngwaahịa a, emeela ule iji tụọ nrụpụta nrụpụta nke agba. Enweela ụkpụrụ gburugburu 0,05 W / m K. Enwetara ụkpụrụ ndị a site na ihe ndị ọzọ na-ekpuchi ihe mkpuchi dịka ajị anụ ịnweta ma ọ bụ polystyrene gbasaa. Nke a gosipụtara oke arụmọrụ nke agba okpomọkụ dị ka insulator.
Ihe na - eme ka ọ bụrụ nke puru iche bụ na ọ na - arụ ọrụ n ’ụzọ abụọ dị iche iche. Nke a pụtara na ọ nwere ike igosipụta okpomọkụ nke na-abịa site n'akụkụ abụọ nke elu agba ahụ. N'oge ọkọchị, ọ na-enyere anyị aka ịkwụsị ikpo ọkụ site n'èzí ma n'oge oyi ọ na-ejigide ya.
Anyị na-abịa ajụjụ na ị ga-ajụ onwe gị mgbe ị hụrụ ịdị ukwuu ya. Ọnụ ego otu lita nke agba a bụ ihe dị ka euro 25. Ọ dabere na nrụpụta na agba. White bụ dị ọnụ ala, ebe ọ nwere ike na-ese ya na agba ọzọ mgbe e mesịrị. Constụle na i nwere odika mkpụrụ nke 0,8 na 1,0 lita kwa square mita na na maka itinye ya n'ọrụ na-agbanyekarị na 10% site na olu mmiri, ihe dị ka € 700 nwere ike gbakọọ iji mesoo mgbidi 10 x 3 m.
Iji mezuo mkpuchi a, uwe abụọ ma ọ bụ atọ nwere igwe na-adịkarị mkpa.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a bụ ngwaahịa nwere ọnụahịa dị elu, mana ejiri arụmọrụ ya na arụmọrụ ya mesie ya obi ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Eserese igwe